Makinist Kimdir Nasıl Makinist Olunur – RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAYaa makaaniku yahay Sida loo noqdo makaanik
14 / 08 / 2019 DUNIDA, GUUD, Headline, TURKEY
Ayaa Mechanic Ah Sida Loo Noqdo Mechanic: Ayaa Ah Mechanic Iyo Sida Loo Noqdo Mechanic Waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno su'aasha. Dareewalku waa darawalka korantada, naaftada ama tareenka xamuulka qaada ee qaada rakaabka ama xamuulka. Tareennada Xawaaraha Sare ee 'Speed ​​Speed ​​Train YHT' waa inay helaan tababar gaar ah. Dareewalku wuxuu maamushaa tareenka inta lagu guda jiro safarka darawalka ayaa mas'uul ka ah.
Waxay daaqaysaa qaybaha farsamo-yaqaannada ee aagga la socda waxayna qaadataa tallaabooyin nabadgelyo oo lagama maarmaan ah,
Waxay ku shaqeysaa isku socodka waxayna raacdaa awaamiirta dhaqdhaqaaqa, jadwalka, calaamadaha tilmaamayaasha iyo shaqaalaha kale ee tareenka waxay socdaan waxayna xukumaan dhaqdhaqaaqa tareenka,
Wuxuu kormeeraa shaqaalaha kale ee ka shaqeeya agagaaraha,
Waxay qabtaan dayactirro yar iyo hagaajin inta lagu guda jiro safarka,
Dhamaadka safarka, waxay haysaa warbixin waxayna buuxisaa buugaagta la xiriira (buugga dhacdooyinka, iwm.).
Gawaarida loo yaqaan (Steam, Diesel, Electric, Diesel-Electric),
Qalabka dab-gooyeyaasha, bakhaarada, xirmooyinka furaha ah, aalado kala duwan,
Buugga Dhacdooyinka (buugga dhibaatooyinka dhibaatooyinku ka yimaaddaan).
Kuwa doonaya inay makaanik yihiin;
U adeegsan kara indhaha iyo cagaha isuduwidda,
Si dhaqso leh ayey uga falcelin karaan dhiirrigelinta
Wax badan baad ogaan kartaa markiiba,
Taxaddar, mas'uul ah, dhiig qabow,
Kala soocaan midabada,
Caafimaadka jirka, maskaxda,
Waa inay ahaadaan dad jecel inay la macaamilaan mashiinada oo leh xirfado farsamo.
Ugu yaraan ardayda ka qalin-jabisa dugsiga hoose ayaa looga baahan yahay waxbarasho xirfadeed. Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagama maarmaan ah in laga helo warbixin guddi dhawaaqeed ah isbitaalada TCDD.
Dugsiga Sare ee Xirfadaha Shaqada
Si toos ah ula xiriir Ömer Faruk ayuu yiri:
Anigu waxaan ahay ardayga dugsiga sare ee xirfadda ah haddii aan doorto makaani ama injineernimo farsamo?
La xiriir Yasin si toos ah ayuu yiri:
Hello Hello Waxaan ahay Qalinjabin Waxbarasho oo Hoose ah, laakiin Haydarpaşa Iskuul xirfadeedka xirfadeed ma aha dhibco ku filan in aan noqdo tiknoolaji tiknoolaji ah oo xiiso leh oo xiiso leh tareenada ka dhanka ah tareenka ayaa leh cudur aad u qallafsan. Isla markii aan ka baxay dugsiga, waxaan si toos ah u aadi lahaa saldhigga iyo tareenka. Sugitaanka jawaab celintaada.
Hilmi Y. ayuu yiri:
Anigu waxaan u shaqeeyaa sidii injineer tareenka ah ee Netherlands, iyo sidoo kale samaynta baaritaan maalinle ah iyo dhibaatooyinka tareenka.
Waxaan sameyn doonaa hayirlisi ku salaysan ee sannadka soo socda la Turkey si ay u soo noqdaan.
Sidee iyo meesha aan makinistlik kartaa turkiyede waxaan u baahan tahay si aad u dalbato Price?
Miyaan ku khasbanahay inaan qaato imtixaan kasta?
dulmay ayuu yiri:
Waxaan tagaa dugsiga sare ee Anatoliya si aan u noqdo makaanig maxaan sameeyaa?
Waad ku mahadsantahay horay haddii aad caawineyso.
baroortii ayuu yiri:
U tag walaalkay magac adag sida maadaama mishiinka injineernimada uusan ahayn mid sahlan.
Cali Colak ayuu yiri:
Waxaan ka helay jawaabo dhammaan calaamadaha suaasha ee maskaxdayda